Hoggaamiyaha Xisbiga Gurmad oo soo dhoweeyay Shirka Dhuusamareeb - Jowhar Somali Leader
Home News Hoggaamiyaha Xisbiga Gurmad oo soo dhoweeyay Shirka Dhuusamareeb
Hoggaamiyaha Xisbiga Gurmad oo soo dhoweeyay Shirka Dhuusamareeb
Hoggaamiyaha Xisbiga Gurmad oo soo dhoweeyay Shirka DhuusamareebGuddoomiyaha Xisbiga Gurmad ahna musharax Madaxweyne Cabdinaasir Cabdulle Maxamed ayaa soo dhoweeyay shirka madaxda maamul goboleedyada dalka ugaga furmay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug.
Qoraal saxaafada loo qeybiyay ayuu Hoggaamiyaha xisbiga Gurmad ku sheegay in shirkaasi uu yahay mid muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed lagana sugayo go’aano dhiiran.
Halkan hoose ka aqriso Warka uu soo saaray guddoomiyaha Xisbiga Gurmad;
Waxaan soo dhaweynayaa shirka wadatashiga Dowlad Goboleedyada dalka ee ka furmay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, waxaana rajeynayaa inuu noqdo mid miro-dhala oo ay kasoo baxaan wax dan u ah dadka iyo dalkaba.
Runtii Madaxda Dowlad Goboleedyada waxaa saaran masuuliyad aad u weyn, dhammaan shacabka Soomaaliyeedna maanta waxay indhaha ku hayaan shirka Dhuusamareb waxaana laga sugayaa shirka go’aanno dhiirran oo horseed u ah hayaanka dowladnimo iyo dimuqraadiyeyntii ay Soomaaliya kusoo socotay muddooyinkii dambe.
Go’aammada madaxdu ay gaari doonaan waxaan rajaynaynaa inay ku saleysnaadaan marxaladda guud ee dalku marayo iyagoo u turaya Dowladnimada Soomaaliyeed ee dhismaysa iyo dimuqraadiyadda dalka iyadoo wax walba oo khilaaf ah oo dhexdooda ah ama Dowladda Federaalka la xiriira ay ku xalliyaan wada xaajood isqancin iyo in miiska dushiisa lagu dhammeeyo oo dalka loo jiheeyo mustaqbal wanaagsan.
Ugu danbeyn waxaan ku bogaadinaynaa Madaxweynaha Galmudug iyo xukuumaddiisa gogosha Soomaaliyeed ee uu dhigay Dhuusamareeb iyo kaalinta firfircoon uu ka qaatay in uu shirka wada-tashigu qabsoomo, sidoo kale shacabka deegaannada Galmudug ayaan u mahadcelinaynaa oo garab taaggan shirka soodhaweyn iyo martisoor qiimo lehna u fidiyey wafdiga iyo madaxda martida ah.